Thwebula MX Player 1.8.10 – Vessoft
Thwebula MX Player
MX Player – a player popular ukudlala ividiyo in a izinga okusezingeni. Isici of MX Player ukusekela of hardware kanye multi-core emagama amafayela enikeza izinga video sokudlala. Isofthiwe lisebenzisana ngetakhiwo ethandwayo video amafayela futhi isebenzisa codecs laso video ukudlala. MX Player ikuvumela ukuba ngokwezifiso umsebenzi izihlokwana, khubaza noma ukhethe ingoma lapho ebukele video nokushintsha ukukhanya kwesikrini. MX Player iqukethe inqwaba amathuluzi ukulungisa ukuphathwa umdlali.
Usekela popular ifomethi
Amazwana on MX Player:
MX Player Ahlobene software: